विश्व शरणार्थी दिवस 2017: शरणार्थी थाह मेरो परिवार संसार र सुन्दर मित्र को एक व्यापक दृष्टिकोण ल्याएको छ. अंग्रेजी शिक्षण | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
द्वारा जेनेट Burdick जुन 12, 2017 ब्लग, स्वागतको शरणार्थी, विश्व शरणार्थी दिवस
शरणार्थी थाह मेरो परिवार संसार र सुन्दर मित्र को एक व्यापक दृष्टिकोण ल्याएको छ
Fro दायाँ बायाँ: मुंडा टाउको संग lin Zaw हाँ, स्वर्गदूतले, Poe Kpaw, ओलिभिया, सौन्दर्य मु, सौन्दर्य मु गरेको पुरानो छोरी लिडिया संग mu Sah, MU Shoobah, एक Poe, जेनेट Burdick. डिसेम्बर 2014
विश्व शरणार्थी दिवस को सम्मान मा 2017: शरणार्थी थाह मेरो परिवार संसार र सुन्दर मित्र को एक व्यापक दृष्टिकोण ल्याएको छ
जब म सिकाउन कला देखि बन्द राखे थियो, म शरणार्थी गर्न अंग्रेजी सिकाउन सुरु. म सान जोस मा संक्रमण घर तिनीहरूले पहिलो शरणार्थी शिविरमा आइपुगेका जहाँ सिकाउनुभयो. म इरान सहित धेरै देशका शरणार्थी सिकाएको, इराक, अफगानिस्तान, बुरुन्डी, रवान्डा, एरित्रिया, क्युबा, चीन, र कोरिया. म तिनीहरूलाई हरेक धेरै सिकेका, तर दुई जवान बर्मेली महिला मलाई परिवार जस्तै भएका छन्.
म लगभग सौन्दर्य मु र म्यू Sah भेट 10 धेरै अगाडी. सौन्दर्य मु उनको पहिलो बच्चा संग गर्भवती थियो; Mu Sah एकल थियो. अंग्रेजी सिकाउने र नागरिकता लागि मेरो साथी तयार गर्दा मेरो मुख्य ध्यान थिए, म बच्चाहरु को लागि आनुवंशिक परीक्षण व्याख्या गर्न निश्चित एक बाथटब मा प्वाल रही जस्तै कुराहरू मदत गर्नुभएको. म डाक्टर तिनीहरूलाई लिनुभएको छ र शिक्षकहरू संग भेट्न. एक उनको परिवार नजिक हुन एक वर्षको लागि दक्षिण डकोटा सारियो, र हामी त्यो थियो, जबकि नजिक सम्पर्कमा राखिएको. मेरो लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण एक बच्चा को जन्म मा र समझ संग सहायता र stillbirth लागि शोकाकुल थियो.
शरणार्थी संग काम मलाई मेरी आमाको एक जवान बच्चाको रूपमा दु दुखाइ लागि बनाउन अप गर्न मदत गरेको छ.
म एक बच्चा थियो जब, त्यो टेक्सास स्कूल सुरु गर्दा मेरो आमा कुनै अंग्रेजी जान्नु उनको कठिनाई को मलाई भन्नुभयो. उनको आमाबाबुले संयुक्त राज्य अमेरिका मा जन्म आफ्नो परिवारको पहिलो पुस्ता थिए, र तिनीहरूले सधैं घरमा चेक कुरा. शरणार्थी संग काम मलाई मेरी आमाको एक जवान बच्चाको रूपमा दु दुखाइ लागि बनाउन अप गर्न मदत गरेको छ. त्यो सधैं म भेट शरणार्थी जीवनमा बारे सुनवाई मा रुचि थियो.
मेरो बर्मेली साथीहरूले मलाई जीवनको एउटा कदर यो छ रूपमा, सानो कुरा को लागि एक आनन्दको, परिवार र साथीहरूलाई भक्ति, र आफ्ना छोराछोरीको वायदा लागि आशा.
तिनीहरूले कुराहरू शेयर मानिसहरूले मलाई दिन र म अन्य शरणार्थी संग यार्ड बिक्री फेला पार्न साथै आफ्नो अनुभव साझेदारी कि. मेरो बच्चाहरु र नातिनातिनी आफ्नो घर र मेरो मेरो मित्र भ्रमण गरेका. मेरो श्रीमान् सधैं तिनीहरूले हामीलाई ल्याउन पनि स्वादिष्ट घर-पकाएको खाना अगाडी देखिन्छ. म एक छोराछोरीलाई मेरो मित्रहरुलाई अब आमा र हजुरआमा जस्तै हुँ, आफ्नो परिवारको त टाढा बस्न किनभने तिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण. तिनीहरूले मलाई Pipi जेनेट कल जो करेन भाषामा हजुरआमा अर्थ. म मेरो शरणार्थी मित्र मदत सन्तुष्टि को गहिरो भावना आनन्द आफ्नो नयाँ देश र तिनीहरूलाई एक रमणीय मायालु बन्धन समायोजन.
बारेमा जेनेट Burdick
म कला सिकाउनुभएको गर्ने एक कलाकार हुँ 20 जेलमा वर्ष, जेल, एक प्राथमिक विद्यालय, र गर्मी कार्यक्रम. म तीन पुस्तक समूह मा छु. म संसारको घटनाहरू पालना र सरकारी प्रतिनिधिहरु अक्सर लेख्न. अन्य चासो यात्रा समावेश, योग, पैदल यात्रा, बागवानी, र बनाउने कला.